Mallet finger (လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်း ကောက်၍ကျိုးခြင်း) - Hello Sayarwon
Mallet finger (လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်း ကောက်၍ကျိုးခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Mallet finger (လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်း ကောက်၍ကျိုးခြင်း)
Mallet finger (လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်း ကောက်၍ကျိုးခြင်း) ကဘာလဲ။
လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်း ကောက်၍ကျိုးခြင်း ဆိုသည်မှာ လက်မ သို့မဟုတ် လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်းတွင်ရှိသောလက်ဆစ်တွင် အရွတ်ထိခိုက်မိခြင်းကြောင့် လက်ချောင်းများ မဆန့်နိုင်တော့ခြင်းကိုခေါ်သည်။ “baseball finger” ဟုလည်းခေါ်သည်။ မမျော်လင့်ထားသော အရာ(ဥပမာ ဘောလုံး) သည် အရှိန်တခုဖြင့် လက်ချောင်းထိပ် သို့မဟုတ် လက်မ အားထိခိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပြီးပါက သင့်လက်မသို့မဟုတ် လက်ချောင်းဆန့်တန်း နိုင်ခြင်းရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ၊
Mallet finger (လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်း ကောက်၍ကျိုးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်း ကောက်၍ကျိုးခြင်းသည် အဖြစ်များပါသည်။ မိန်းကလေးများတွင်ပို၍ဖြစ်တတ်သည်။ မည်သည့်အသက်အရွယ်တွင်မဆိုဖြစ်တတ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်စေသည့်အခြေအနေများကိုရှောင်ရှာ်းခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်၊ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့်တိုင်ပင်ပါ၊
Mallet finger (လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်း ကောက်၍ကျိုးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်း ကောက်၍ကျိုးခြင်း များမှာ
လက်ချောင်းတွင် ယောင်လာခြင်း နာခြင်း အညိုအမဲစွဲလာခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ လက်ချောင်းထိပ် သည် သိသိသာသာ ကွေး၍ပြုတ်ကြနေတတ်သည်။ ကွေးကြနေသောလက်အား တစ်ခြားလက်ဖြင့်ကိုင် ဆန့်မှသာ ဆန့်တန်းနိုင်မည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော လက္ခဏာတွေရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
လက်သည်းအောက်တွင်သွေးရှိနေခြင်း လက်သည်းကွာကျခြင်းတို့ဖြစ်ပါက အရေးပေါ်ဟုမှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ လက်အရိုးကျိုးသည့်လက္ခဏာသို့မဟုတ် အနာပေါ်တွင် အရိုးထွက်လာခြင်းတို့ရှိနေပါက ရောဂါပိုးမွားဝင်နှုန်းပိုများစေပါသည်။
Mallet finger (လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်း ကောက်၍ကျိုးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မမျော်လင့်ထားသော အရာ(ဥပမာ ဘောလုံး) သည် အရှိန်တခုဖြင့် လက်ချောင်းထိပ် သို့မဟုတ် လက်မ အားထိခိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပြီးပါက သင့်လက်မသို့မဟုတ် လက်ချောင်းဆန့်တန်း နိုင်ခြင်းရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ၊မည်သူမဆို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Mallet finger (လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်း ကောက်၍ကျိုးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်း ကောက်၍ကျိုးခြင်ဖြစ်ပါကဆေးကုသမှုလိုအပ်ပါမည်။ ထိုမှသာလက်ချောင်း၏ပုံမုန်လုပ်ဆောင်မှုအားလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နှစ်ပါတ်အတွင်းဆေးကုသခြင်းပြုလုပ်သင့်သည်။ သို့သော် ထိခိုက်ပြီးတစ်လကျော်မှကုသမှုခံယူသော်လည်း အပြည့်အ၀ ပြန်ကောင်းသောကိစ္စများလဲရှိခဲ့ဘူးသည်။
ရောဂါအခြေအနေမေးမြန်းခြင်းနှင့် ကြည့်ပြီးနောက် စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပါမည်။ စမ်းသပ်ချိန်တွင် ဆရာဝန်သည် သင့်၏ထိခိုက်မိသော လက်ချောင်းကိုကိုင် ဆန့်တန်းခိုင်းပါမည်။ ထိုသို့စမ်းသပ်ခြင်းကို လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်း ကောက်၍ကျိုးခြင်အြားစမ်းသပ်ခြင်းဟုခေါ်သည်။
သင့်ဆရာဝန်သည် သင့်အားဓါတ်မှန်ရိုက်ခိုင်းပါလိမ့်မည်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့်အရွတ်ကျိုး၍ လက်ထိပ်ဆစ် အပြင်သို့ရောက်နေခြင်းကိုလည်းကောင်း အရိုးကြီးကျိုးနေခြင်းကိုလည်းကောင်းမြင်နိုင်သည်။ အဆစ်နှစ်ခုညီမညီလဲသိနိုင်သည်။ မည်မျှအထိပြင်းထန်သည်ကိုလဲသိနိုင်သည်။
Mallet finger (လက်ချောင်းထိပ်ပိုင်း ကောက်၍ကျိုးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လက်ချောင်းထိပ် ကောက်၍ကျိုးခြင်းအားမကုသပါက ထိခိုက်မိသောလက်ချောင်းများတောင့်တင်းခြင်း လက်ချောင်းပုံသဏာန်မမှန်တော့ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ များတော့အားဖြင့် ခွဲစိတ်မှုမလိုအပ်ပဲကုသနိုင်သည်။
ကလေးများတွင်ဖြစ်ပါက အရိုးကြီးထွားစေသော အရိုးနုကိုထိခိုက်တတ်သည်။ ထိုကြောင့် ပုံသဏာန်မမှန်တော့ခြင်း တိုခြင်းများဖြစ်နိုင်သဖြင့် ဂရုတစိုက်ကုသင့်သည်။
လက်ချောင်းထိပ်ကောက်၍ကျိုးခြင်းအား ကြက်စီးစီး၍ကုသလေ့ရှိသည်။ အနာကျက်သည့်အထိ လက်ထိပ်အားဆန့်၍ကြက်စီး စီးရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ချောင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များပုံမုန်အတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပတ်တီးအား အချိန်ပြည့်ရှစ်ပါတ်ခန့်ဝတ်ရမည်။ ရေချိုးနေတုန်းဝတ်ရမည်။ ရေချိုးပြီးလျင်ဂရုစိုက်၍ လဲလှယ်ရမည်။ ကျောက်ပတ်တီးခြောက်ချိန်တွင်ထိခိုက်မိသော လက်ချောင်းအား ဆန့်တန်းထားရမည်။ လက်ချောင်းကွေး၍ ပြုတ်ကျခဲ့သော် အနာကျက်ချိန် ကြာမည်ဖြစ်သဖြင့် ကြက်စီးအားအချိန်ကြာမြင့်စွာစီးဖို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
ကြက်စီးအချိန်ကြာမြင့်စွာစီးခြင်းကား အသားအရေကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ထိုသို့မဖြစ်စေရန် သင့်၏အသားအရေထိန်းသိမ်းပုံများကို သင့်ဆရာဝန်က ပြောပြပေးပါလိမ့်မည်။ ၈ပါတ်အတွင်း ရောဂါအခြေအနေတိုးတက်မှု ရှိမရှိကို တိုင်းတာရန် ရက်ချိန်းပေးပါလိမ့်မည်။
ကြပ်စီးစီးပြီး ပထမသုံးလေးပါတ် ကြာချိန်တွင် ကြပ်စီးစီးချိန်အရေအတွက်ကိုလျော့ပေးပါလိမ့်မည်။ ညဘက်သာစီးဖို့လိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ ကြပ်စီးစီးခြင်းဖြင့် လက်ချောင်းပုံသဏာန်သာမက လုပ်ဆောင်မှုပါလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း လူနာအများစုတွင် လက်ချောင်းဆန့်တန်းခြင်းမပြုလုပ်နိုင်တော့သည်များလဲရှိသည်။
အချို့လူနာများတွင် ကြပ်စီး စီးရခက်ခဲတတ်သည်။ ထိုလူနာများတွင် ယာယီအပ်အား လက်ချောင်းအဆစ်များကိုဖြတ်သန်းထားစေခြင်းဖြင့်လက်ချောင်းအားဆန့်တန်းစေသည်။ ၈ပါတ်လောက်ထားတတ်သည်။
အရိုးကျိုးမှုကြီးမားခြင်း သို့မဟုတ် လက်ဆစ်အရိုးမညီတော့ဘဲလွဲနေခြင်း များရှိပါက ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခြင်းကိုစဉ်းစားပါမည်။ အနာကျက်ချိန်တွင် ကျိုးသွားသောအရိုးများအား အပ်များဖြင့်ထိန်း၍ ထားသည်။
အရိုးကျိုးအပိုင်းအစများမရှိပါက ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခြင်းရှားသည်။ အရွတ်အားပြင်ခြင်း တွင် အရွတ်အစားထိုးမှလိုအပ်တတ်သည် -အရွတ်အား သင်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းမှယူ၍ အစားထိုးသည်- သို့မဟုတ် အရွတ်နှစ်ခုပေါင်း၍ ဆန့်တန်းအောင်ပြုလုပ်သည်။
ခွဲစိတ်မှုလိုအပ်သည်မလိုအပ်သည်ကို အရိုးဆရာဝန် မှဆုံးဖြတ်မည်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 23, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 23, 2019
Mallet finger.http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00018. Accessed October 30, 2017
Mallet finger.https://www.orthobullets.com/hand/6014/mallet-finger. Accessed October 30, 2017